i-cleanroom sandwich panel Factory | I-china cleanroom sandwich panel Abenzi, abahlinzeki
iphaneli lesangweji ledwala loboya elinamabhodi angaphezulu wesendlalelo se-magnesium oxide
Yamukela ishidi lekhwalithi ephezulu ye-PCGI ene-EPS filler. Isandla senziwe ngohlaka lwephrofayili ye-GI noma ye-Aluminium.
75mm 50mm engangenamlilo engasindi ngci EPS usimishi isangweji odongeni panel for prefabricated indlu ifektri yokugcina
iphaneli yodonga lwentaba entsha yohlobo olusha oluphezulu lwe-aluminium silicate
Yamukela ishidi lekhwalithi ephezulu ye-PCGI ene-aluminium silicate filler. Isandla senziwe ngohlaka lwephrofayili ye-GI noma ye-Aluminium.
ipaneli yesamentshisi ye-MGO board engangeni umlilo
Iphaneli lesangweji lesango lesilichushi elingenamlilo ophahleni lwodonga igumbi elihlanzekile
Iphaneli yesangweji le-magnesium oxysulfate yegumbi elihlanzekile elenza imithi ekhiqiza ukudla esibhedlela lingacimi umlilo